Yakanakisa VT/HT Series Yakamisikidzwa Kuchengeta Matangi Mugadziri uye Fekitori | BTCE
BTCE VT kana HT serials matangi akagadzirirwa kuchengetedza LIN, LOX, LAR, ari vertical (VT) kana horizontal (HT) ekuchengetedza matangi ane vacuum perlite kana super insulation.
BTCE VT kana HT serials matangi akagadzirirwa kuchengetedza LIN, LOX, LAR, ari vertical (VT) kana horizontal (HT) ekuchengetedza matangi ane vacuum perlite kana super insulation. Iyo VT kana HT yakatevedzana yakamira matangi ekuchengetera anowanikwa ane hunyanzvi kubva pa5 m3 kusvika 100 m3 ine yakanyanya kubvumidzwa kushanda kudzvanywa 8 kana 17 bar uye yakagadzirwa zvinoenderana neChinese kodhi, AD2000-Merkblatt, EN kodhi 97/23/EC PED (Pressure Equipment Directive. ), ASME kodhi, Australia/New Zealand AS1210 nezvimwe.
■ The vharafu unoshanda sisitimu compact uye nyore kushanda uye kuchengetedza;
■ Mavharuvhu akabatana nevacuum ese zvikamu zvinotengeswa kunze kwenyika kuti ave nechokwadi chehupenyu hwevacuum uye kuvimbika;
Model Gross Volume (m3) Net Vhoriyamu (m3) Hurefu kana kureba(m) Diameter(m) NER LO2(% kukwanisa / zuva) MAWP(MPa)
VT kana HT5 5.3 5 5.25 2.0 0.38 0.8
VT kana HT10 10.6 10 6.02 2.2 0.27
VT kana HT15 15.8 15 8.12 0.23
VT kana HT20 21.1 20 10.2 0.21
VT kana HT22 23.1 22 10.9
VT kana HT25 26.4 25 9.6 2.5
VT kana HT30 31.6 30 11 0.2
VT kana HT33 34.7 33 12.2
VT kana HT40 40 38 9.9 3 0.19
VT kana HT50 50 47.5 11.3
VT kana HT60 60 57 13.2 0.18
VT kana HT80 80 76 13.5 3.6
VT kana HT100 100 95 16.3 0.16
Yakakosha dhizaini yekumanikidza uye vhoriyamu inowanikwa pane yakakosha chikumbiro. Thermosiphon matangi anowanikwa kune ese mamodheru. Dhizaini uye yakatarwa inogona kuchinja pasina chiziviso chekutanga.
VT- Vertical, HT- Yakatwasuka
Zvigadzirwa zvekambani yedu zvinotora yakasarudzika yemukati yekumisikidza chimiro dhizaini uye yepamusoro vacuumizing tekinoroji, iyo inogona kuve nechokwadi chehupenyu hurefu hwevacuum yetangi yekuchengetedza. Innovative modular piping system inovimbisa kuti static evaporation rate yematangi ekuchengetedza iri nani pane indasitiri chiyero. Pamusoro pekushandisa zvakajairwa, tekinoroji yekusimbisa tekinoroji yakazvimiririra yakagadziridzwa nekambani yakasarudzwa seyero yenyika. Kubva 2008, kambani yedu yakazvipira kuindasitiri gasi rekuchengetedza tangi zvigadzirwa zvekugadzira, uye mabhizinesi epamba nekunze kuti apedze nhamba huru yemirairo. Kuti isangane neinozotevera yakakura kudiwa kwemusika, kambani yedu inogara ichivandudza yayo yega kugona kwekugadzira.
Muchikamu chechipiri chegore ra2017, kuitira kuti tivandudze kutakura kwezvigadzirwa zvegasi mumaindasitiri, takawedzera mimwe michina yekugadzira, zvinosanganisira crane, cantilever crane, winding line, set line, rotary welding line, nezvimwewo, kukwidziridza maitiro ekugadzira. uye kugadzirisa, kuvandudza simba rekutumira panguva imwe chete, zvichiita kuti chigadzirwa chemhando chiwedzere kugadzikana uye chakavimbika. Kusvika parizvino, mutsara wekugadzira mutsara unosvika matanhatu pazuva, uye gore negore kuburitsa kwe30m3 yeindasitiri gasi ekuchengetedza matangi anopfuura zviuru zviviri zvezvikamu.
"BTCE shasha yemhando" ndiyo sirogani yatakazvipira kwairi, kuitira kuti vatengi vagutsikane isu tinonyatso kudzora maitiro ese kubva kune zvigadzirwa kusvika mufekitori kusvika chigadzirwa chabuda mufekitori uye chaendeswa kune vatengi. Panguva imwecheteyo, isu tinosimbisa manejimendi uye chirongwa chekutonga kwemhando, kuitira kuti tichengetedze mukana wakanakisa mumakwikwi anotyisa, saka, isu mundima yepasi rose indasitiri gasi tangi patakahwina chinzvimbo chakakurumbira. Tinovimba kushanda newe kuitira ramangwana rinoonekwa.
Pa-saiti liquid oxygen tank yevatengi muMalaysia
Vertical storage tank yakaiswa panzvimbo yekuparadzanisa mhepo yeMesser muVietnam
Zvakapfuura: Horizontal Super Large Storage Tangi
Zvinotevera: IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) Container ye 20-tsoka